Zen Aesthetics V Neck Sleeveless Dress - Buddhatrends
လွန်ခဲ့သော | နောက်တစ်ခု
ဇင်ဗေဒ V ကိုလည်ပင်း Sleeveless Dress
$56.95 $67.00 သငျသညျ (15% Save$10.05)
Beige သ / S က Beige သ / M က Beige သ / L ကို Beige သ / XL Beige သ / XXL Beige သ / XXXL Beige သ / 4XL Beige သ / 5XL မီးခိုးရောင် / S က မီးခိုးရောင် / M က မီးခိုးရောင် / L ကို မီးခိုးရောင် / XL မီးခိုးရောင် / XXL မီးခိုးရောင် / XXXL မီးခိုးရောင် / 4XL မီးခိုးရောင် / 5XL ရေတပ်အပြာရောင် / S က ရေတပ်အပြာရောင် / M က ရေတပ်အပြာရောင် / L ကို ရေတပ်အပြာရောင် / XL ရေတပ်အပြာရောင် / XXL ရေတပ်အပြာရောင် / XXXL ရေတပ်အပြာရောင် / 4XL ရေတပ်အပြာရောင် / 5XL အဖြူ / S က အဖြူ / M က အဖြူ / L ကို အဖြူ / XL အဖြူ / XXL အဖြူ / XXXL အဖြူ / 4XL အဖြူ / 5XL
T က *** တစ်ဦး
Платье супер!Хлопок, очень легкое, очень люблю этот стиль. Не просвечивает, если одеть соответсвующее белье. На 42 заказала s. Сидит свободно, как и хотела.
Y က *** ဏ
платье хорошее на.лето
အီး *** တစ်ဦး
Посылка до Москвы за2недели, трек отслеживался. Материал натуральный, очень приятный! При стирке вода подкрасилась. Синий вариант не просвечивает. На ОГ 102 верх сел хорошо, а вот низ на ОБ 102 немного великоват, но не критично. Но есть ощущение халата, буду носить дома и на даче.
Отличныйсарафан, даженеожидала။ Плотный, натуральный, оченькрасивыйвырез, сидитсвободно-то, чтонадо။ Длинанарост 1,64 немноговышещиколотки။ Имакасиныибосоножки, всеподойдёт။ Респектпродавцуипроизводителю။
Замечательноеплатьишко - тканьдовольноплотная။ Наог102, об101, от79бралаМ, нарост 164 нижесерединыикры။
အို *** r
L ကို *** တစ်ဦး
xorowenjkoe platje ။ nemnogo boljwoe, xorowo budet leto na ။ dumala prjamoe မရှိ bedra nemnogo videleni ။
Всеотлично, носразмеромяошиблась ... платьевелико။ всезамечательно - Акачествуидоставкеမူ။
တစ်ဦးက *** ဏ
Замечательное, летнее, легкое, дышащее. Всё по размеру. Сшито аккуратно. Цвет, как на фото.
J ကို *** တစ်ဦး
Отличноепростенькоеплатьеналето။ 168-115-95 селовеликолепнообъёмы 115 ростНа။ Длинапощиколотку, животнеобтягивает, талиюподчёркивает, вобластигрудивытачки, чтовпоследнеевремя, накрупныхмоделяхредкость။ Тканьдешёвыйх / б, значительноупрощаетмодель, нодлядеревни, дачи, пляжавсамыйраз, затокомфортновнатуральном။ Расстроилбрактканинавидномместе။ Продавецотзывчивый, всегдаотвечает, техничнорешаетпроблемы။ ВмоёмслучаепосылказагуляланатерриторииКитая, вернуласьобратно, иззачегоэтомутрекномерубылаполученапосылкадругимадресатомမူ။ Честноприготовиласьбитьсязасвоиденьги, дажеоткрыласпор, нопродавецубедилподождатьповторнойпосылкидругойкомпанией။ И, бинго! посылочкауменя, принёскурьердомой။
Платьенеплохое, нопришлосбольшимпятномспередивнизу။ Попробуюотстирать, еслинеотстирается, откроюспорначастичныйвозвратзапеределкутовара, чтобыликвидироватьбрак။ 50-52 русскийНа - XXXL велико။ Можетпослестиркиподсядетиприобрететжелаемуюусадку (еслинет, топростонемногоушьюсбоков) ။ Материал, похоже, натуральный, возможнодажехлопок။ Иэторадует, таккаксинтетику, даещеналетнемплатьеяпростонепереношу။
အီး *** t ကို
အလွန်အဆင်းလှသောအစ်မဝါဂွမ်းစားဆင်ယင်။ အကြှနျုပျ၏တွေဆီကနေ S ကိုအရွယ်အစားအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, 92 ဖြစ်ပါတယ်။
D ***, f
размернаясеткасовпадаетвгрудинемногоаеликопридетсяушитьатакбомбавес 69 рост170
the dress is well tailored. details helped choose the size. Only thing is I expected the fabric to be thinner, but all in all am very happy and plan to buy another color
V ကို *** v
thank you very much. the robe is very excellent and fitted well.
S က *** ဏ
Nice dress and good quality. Arrived fast (in2weeks) to my country. Size table data corresponds the real size. Excellent service!
R ကို *** ဇ
Looks exactly like the pic.! Super quick delivery
linen fabric very like, экостиль straight, good. made
good. all like the photo. genuine fabric.
H ကို *** ဏ
ငါရောင်းချသူ၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စတိုးဆိုင်နှင့်အတူပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ငါထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါကျွန်မစိတ်ကျေနပ်မှုငါ့မှတ်စုကိုငါပေးမည်။ ကြေးဇူးတငျစကား
cool, quality is excellent. gray blue. summer super. my height 163 to ankle length
ငါဒီတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားထည်နှင့်ဖန်ဆင်းလိမ့်မည်ဟုထင်ဆိုပါစို့; ပိုမိုပေါ့ပါးတစ်ခုခု။ ဒါဟာသော်လည်းကောင်းစွာပဲအနည်းငယ်သွေချည်နှင့်အတူပုံရသည်ကိုဖန်ဆင်းဝါဂွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားအချက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 5XL အမေရိကန်အရွယ်အစား 16 / 18 မှညီမျှသည်။ အဆိုပါရောင်းချသူအထုပ်တစ်ချိန်ကဆုံးရှုံးသွားသောတယ်သကဲ့သို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးရှိပါတယ်, သူတို့လျင်မြန်စွာအမျက်သိုနေကြနှင့်ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူယနေ့အထိငါ့ကိုတက်နေခဲ့တယ်။ ဤသူတို့5ကြယ်ပွရ!
တင့်တယ်စားဆင်ယင်။ ဂရိတ်ထည်တို့နှင့်ကြီးသောစတိုင်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
S က *** ဎ
N ကို *** s ကို
အစာရှောင်ခြင်းပေးအပ်ခြင်း။ အလွန်အရည်အသွေးကောင်း။ သို့သော် tooooo ကြီးတွေ။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းသေးငယ်အရွယ်အစားသို့မဟုတ်ပင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ခုယူရန်လိုအပ်သောခဲ့ပုံရသည်
: D *** င
မင်္ဂလာပါ, အနှောင့်နှေးများအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်မရက်အနည်းငယ်ကွာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစားဆင်ယင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်တယ်! Dominique
R ကို *** ဏ
Vestido muy bonito, un algodón grueso, mejor မသန်စွမ်းအဘယ်သူမျှမ transpariencias ES ။ Talla Bien က de espaldas y က pecho, algo Grande က de caderas pero Tien arreglo ။
အဆိုပါစားဆင်ယင်, အရည်အသွေးကောင်းအလွန်ကောင်းတဲ့ဒါပေမယ့်အဖြူ offwhite သည်နှင့်ငါတကယ်အဖြူ prefered ခဲ့သည်။ သို့သော်ပျော်ရွှင်။ ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရောင် offwhite အဖြစ်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။
Livraison Rapid ။ le တစ်ရှူး est magnifique ။ je suis trèstrès satisfaite!
တစ်ဦးက *** B ကို
ပိုပြီးဈပွောငျးလဲနိုငျစျေးနှုန်းအဘို့အသေးငယ်ပေမယ့်နေဆဲ ok မအလတ်စားနဲ့တူ
ငါသည်ဤအထုပ်ယနေ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည် .... မယုံကြည်ကြဘူး။ ဒါဟာ .... သာ2ရက်သတ္တပတ်အလွန်လျင်မြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစားဆင်ယင်ကျွန်မအလွန်ကြိုက်, အဆင်းလှသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဂျီဩမေတြီစပျစ်သီးပုံနှိပ်ပါ Hippie Dress
ဂျီဩမေတြီစပျစ်သီးပုံနှိပ်ပါ Hippie Dress $54.40 $64.00
လျော့ရဲရဲနဲ့လဲမှို့များနှင့်ပိတ်ချော Dress $102.85 $121.00
အလွှာ Irregular ဇာပန်းထည် Bohemian စားဆင်ယင်
အလွှာ Irregular ဇာပန်းထည် Bohemian စားဆင်ယင် $53.40 $89.00
Plus အား Size ကို Wide ခြေထောက်နဲ့ချောင်ယေဘုယျအား
Plus အား Size ကို Wide ခြေထောက်နဲ့ချောင်ယေဘုယျအား $66.30 $78.00
Long ကအင်္ကျီလက်နှင့်အတူစပျစ်သီးကိုပန်းပိတ်ချော Dress
Long ကအင်္ကျီလက်နှင့်အတူစပျစ်သီးကိုပန်းပိတ်ချော Dress ရောင်းကုန်ပြီ
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသောင့်သက်သာလဲမှို့ပိတ်ချောအစင်း Maxi Dress
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသောင့်သက်သာလဲမှို့ပိတ်ချောအစင်း Maxi Dress ရောင်းကုန်ပြီ
အစိုင်အခဲအရောင်ခြေကျင်း-ရှည် Retro Dress
အစိုင်အခဲအရောင်ခြေကျင်း-ရှည် Retro Dress $73.95 $87.00